पृथ्वीनारायण राष्ट्रनिर्माता होइनन् | Nagarik News - Nepal Republic Media
३० पुस २०७४ ३२ मिनेट पाठ
राष्ट्र वा राष्ट्र उन्मुखता (नेसन अर नेसनालिटिज) चाहिँ खास मानव समूहको लामो ऐतिहासिक यात्रामा निर्मित साझा भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक र मनोवैज्ञानिक अपनत्वसहितको गौरवभाव हो । अर्थात्, मौलिक सभ्यता हो । देशचाहिँ जनता र राज्य भएको निश्चित भूगोल हो । त्यसैले देश बनाउन खास भूगोलमा दमनकारी राज्यबाट जनतालाई काबुमा राखे पुग्छ । तर, राष्ट्र बनाउन लामो ऐतिहासिक जनताबीचको स्वेच्छिक सहकार्यबाट गुज्रनुपर्छ । नेपाल करिब तीन हजार वर्षदेखि फरक–फरक सामाजिक मानव समूहहरू एकआपसमा अन्तक्र्रिया गर्दै गरेको भूगोल हो । एकीकरण भनेको स्वेच्छिक एकताको विस्तृत भाव हो ।
संसारको इतिहासमा सबै एकीकरण बल प्रयोगबाटै भएको भन्ने सही होइन । हजरत मोहम्मदले आजभन्दा १४ सय वर्षपहिले इस्लामको एकीकरण बर्बर युद्धमा होमिएका सयौँ कबिलाहरूको बीचमा छलफल र एकताद्वारा हासिल गरेका थिए । आजको संयुक्त राज्य अमेरिका र विघटित सोभियत संघ दुवै नै छलफल र एकताद्वारा एकीकृत भएका थिए । दोस्रो, बल प्रयोगबाट राज्य र त्यस राज्यले शासन गर्ने देशको सीमा बनेको थियो भन्नु र एकीकरण भन्नु एउटै होइन ।
पहिलो, संसारको इतिहासमा सबै एकीकरण बल प्रयोगबाटै भएको भन्ने सही होइन । हजरत मोहम्मदले आजभन्दा १४ सय वर्षपहिले इस्लामको एकीकरण बर्बर युद्धमा होमिएका सयौँ कबिलाहरूको बीचमा छलफल र एकताद्वारा हासिल गरेका थिए । आजको संयुक्त राज्य अमेरिका र विघटित सोभियत संघ दुवै नै छलफल र एकताद्वारा एकीकृत भएका थिए । दोस्रो, बल प्रयोगबाट राज्य र त्यस राज्यले शासन गर्ने देशको सीमा बनेको थियो भन्नु र एकीकरण भन्नु एउटै होइन ।
संसारको हरेक राष्ट्र र देश निर्माणका आफ्नै विशेषता र परिघटना छन् । तर्क गर्ने गरिएजस्तो सबैतिर बल प्रयोगबाट एकीकरण गरिएको भन्ने कुरा सही होइन ।
एउटै भाषा, एउटै संस्कृति र एउटै जाति समग्रमा एउटै सभ्यताका फरक–फरक राज्यहरूलाई एउटै बनाउन बल प्रयोग गर्नु र फरक सभ्यतालाई एउटै राज्यको अधीनमा ल्याउन गरिने बल प्रयोग एउटै कुरा होइन । एउटै जाति वा सभ्यताभित्रको बल प्रयोग केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र हुन्छ र त्यसद्वारा बन्ने ठूलो देशले एउटै भाषा, संस्कृति र जाति समग्रमा त्यस सभ्यताको विकासमा ठोस योगदान गर्छ । छिमेकी चीनको निर्माणको मूल चरित्र यही प्रकारको हो । त्यसैले त्यस्तोलाई एकीकरण पनि भन्न सकिएला । तर फरक सभ्यतामाथि बल प्रयोगद्वारा राज्य विस्तार गर्नु भनेको खास सभ्यताको मानव निर्मित सबै सांस्कृतिक सम्पदालाई नाश पार्दै जानु हो । एउटा सभ्यता र अर्को सभ्यताबीच छलफल, सहकार्य, सहमति र एकताद्वारा एकीकरण सम्भव छ तर बल प्रयोग गरेर एउटा सभ्यताले अर्को सभ्यतालाई शासित बनाएर एकता वा एकीकरण सम्भव नै छैन । त्यस्तो बेला त विजित सभ्यताका मानवीय सबै सांस्कृतिक आर्जनलाई ध्वस्त पार्दै लगेर मात्र राज्य सञ्चालन सम्भव हुन्छ ।
उपनिवेशवादी कालमा एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स आदिको शासनमुनि ल्याउन अन्धाधुन्ध गरिएका बल प्रयोग जायज मान्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा यो कुरा मान्ने हो भने वर्तमान भारतको राष्ट्रनिर्माता बेलायतकी महारानीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । के यसो गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन ।
बल प्रयोग गरेर भए पनि एउटै राज्यअन्तर्गत धेरै भू–भाग र जनतालाई ल्याउनु नै एकीकरण हो भने इतिहासमा राज्य निर्माणका निम्ति भएका सबै बल प्रयोग र युद्ध जायज मान्नुपर्ने हुन्छ । उपनिवेशवादी कालमा एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्स आदिको शासनमुनि ल्याउन अन्धाधुन्ध गरिएका बल प्रयोग जायज मान्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा यो कुरा मान्ने हो भने वर्तमान भारतको राष्ट्रनिर्माता बेलायतकी महारानीलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । के यसो गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । ब्राजिललाई उपनिवेश बनाएर, ब्राजिली भाषाको हत्या गरेर आज सबै ब्राजिलीले पोर्चुगिज भाषा बोल्न बाध्य पार्नुलाई ठीक मान्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा उपनिवेशवाद समेत ठीक थियो भन्ने स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवधारणाले त भारतको लखनउ विद्रोहलाई दमन गरेर जंगबहादुरले बर्दियादेखि कञ्चनपुरसम्मको भू–भाग पुनः प्राप्त गर्ने मूल भूमिका खेलेकाले उनलाई पनि नेपालको उपएकीकरणकर्ता वा उपराष्ट्रनिर्माता मान्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याउँछ । ब्रिटिस स्वार्थमा लखनउ दमन ठीक मान्नुपर्ने हुन्छ । के यही दृष्टिकोण सही हो त ?
पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार नगरेका भए अंग्रे्रजले सिंगै नेपाल खान्थ्यो भन्ने जुन तर्क छ, त्यसो हुन पनि सक्थ्यो, नहुन पनि सक्थ्यो । अंग्रेजले त्यति बेलाका राज्यहरू लिन खोज्दा एक–डेढ सय किलोमिटर परका गोरखालीसँग त लड्ने कीर्तिपुरवासीले समुद्रपारिका अंग्रेजसँग लड्ने जुक्ति खोज्दैनथे होलान् भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने कुरा पनि होइन ।
पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार नगरेका भए अंग्रे्रजले सिंगै नेपाल खान्थ्यो भन्ने जुन तर्क छ, त्यसो हुन पनि सक्थ्यो, नहुन पनि सक्थ्यो । अंग्रेजले त्यति बेलाका राज्यहरू लिन खोज्दा एक–डेढ सय किलोमिटर परका गोरखालीसँग त लड्ने कीर्तिपुरवासीले समुद्रपारिका अंग्रेजसँग लड्ने जुक्ति खोज्दैनथे होलान् भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने कुरा पनि होइन । अर्को कुरा, नेपालीले प्रतिरोध गर्दा पनि विदेशीको प्रतिरोध नगर्ने भारतीय जनताले त अन्ततः उपनिवेशवादलाई धपाए भने नेपाली जनताचाहिँ लड्दै लड्दैनथे त कुनै हालतमा भन्न सकिने कुरा हुनै सक्दैन ।
अर्को दुःखदायी यथार्थतिर पनि ध्यान खिचौँ । पृथ्वीनारायणको आँखाबाट नहेरी नेपालका जनजाति, मधेसी, दलित र कर्णालीपारिका जनताको आँखाबाट हेरियो भने तत्कालीन नेपालको राज्य र अंग्रेजमा के कति फरक देखिन्छ ? यदि पृथ्वीनारायणको राज्यको अधीनस्थ राख्नुभन्दा अंग्रेजी राज्यको अधीनस्थ बनाएको भए कर्णालीपारि, दलित, मधेसी र जनजातिलाई के फरक पथ्र्यो होला ? कर्णालीपारि आजभन्दा थोरै भए पनि बढी भौतिक विकास हुन्थ्यो होला । जसरी भारतका दलितको आवाज सुन्नसम्म भए पनि सुनेजस्तै नेपाली दलितका आवाज त्यतिबेलै सुन्न सुरु हुन्थ्यो होला । जनजाति र मधेसीले आजभन्दा पक्कै पनि बढी भौतिक विकास र सुविधा पाउँथे होलान् । बदलामा दलित, मधेसी, जनजाति र कर्णालीपारिले अंग्रेजको रैती हुनुपथ्र्यो, कुरा त्यति हो । त्यसैगरी मुस्लिम र जनजातिले अझै थप आफ्नो धर्ममाथिको समेत दमन भोग्नुपथ्र्यो, यति न हो । पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौंकेन्द्रित हिन्दू राज्यको अधीनस्थ भएपछि नेपालका दलित, जनजाति, मधेसी र कर्णालीपारिले अंग्रेजी उपनिवेशवादले गर्ने अत्याचारभन्दा कम के भोगे त ? पृथ्वीनारायणको राज्य दूरीका हिसाबले अलि नजिकबाट आएको, छालाको रंग अलि बढी मिल्ने तर अंग्रेज धेरै टाढाबाट आएको, छालाको रंग धेरै नमिल्ने । यहाँभन्दा बढी फरक के भयो त यथार्थमा ? छातीमा हात राखेर सोच्ने हो भने गुणात्मक रूपमा केही पनि फरक भएन ।
यसको अर्थ साम्राज्यवाद ठीक हो भन्ने निष्कर्ष कदापि होइन, बरु दलित, जनजाति, मधेसी र कर्णालीपारिको निम्ति पृथ्वीनारायणको राज्य ‘चिनेको चोरले काट्छ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने सानो उपनिवेशवादी राज्य नै थियो । त्यसकारण नेपाल भनेको दलित, जनजाति, मधेसी र कर्णालीपारिका जनताको पनि हो भनेर बुझ्ने बित्तिकै त्यो एकीकरण थियो या राज्य विस्तार भन्ने कुराको एउटा बन्द झ्याल खुलिहाल्छ ।
भक्तपुरमा मीत लाउन आउँदा सहस्र स्विकार्ने भक्तपुरेहरूको आवश्यकता भनेको गोरखासँग मीतको साइनो गाँस्ने होला तर पृथ्वीनारायणको आवश्यकता हमला गरेर अधीनस्थ बनाउने भयो ।
प्रकाशित: ३० पुस २०७४ १९:२५ आइतबार